Nezvedu - Eugeng International Kambani
Eugeng International Kambani
Eugeng inyanzvi uye inogadzira inogadzira michina yezvizoro muShanghai . Isu tinoramba tichiedza kusimudzira iri kukura mukurumbira mukati mekambani yezvizoro nekusangana nezvido zvevatengi zvekugadzira, uye ichapa ichangoburwa uye epamusoro matekinoroji eruzivo neruzivo rweyakanyanya mhinduro nekugara uri pamberi pekuda kwemutengi.
Isu tine yedu fekitori yekugadzira fekitori ine rakasimba R & D timu muSongjiang Viwanda Park.Saka tinogona kubatana kuti tigadzire zvigadzirwa uye zvakare kukupa iwe unogadzirirwa iwe. Isu tinogadzira, kugadzira uye kutumira kunze kwemachira epepstick, poda yekudhinda michina, lip gloss yekuzadza michina, mascara michina, zvipikiri polish michina, cosmetic penzura yekuzadza michina, yakabikwa hupfu michina, labelers, kesi packer, mamwe marara ekuzora michina uye zvichingodaro.
Nemufaro mukuru, tinoda kuita bhizinesi nekambani yako inokudzwa pane uno mukana wekuwedzera zviito zvedu. Kana uchinzwa kuti tinogona kubvumidza zvaunoshuvira kana kuti zvinogona kuva chero rubatsiro kwauri pane chero nyaya, ndapota usazeze kutibata isu. Paunoita chibvumirano neEugeng, hauzove mutengi wedu unova shamwari yedu.
Kambani Yekugadzira Inosarudzika MuCosmetics Machina
1.Gamuchira OEM yePlastiki compact box
2. Gamuchirai OEM yezvigadzirwa zvekushongedza senge lipstick, lip gloss, mascara zvichingodaro.
3. Kugamuchirwa kuti uve mumiririri weNyika yako
4. Nguva yewarandi igore rimwe chete
5. Kupa mavhidhiyo ekutsigira pamhepo, maawa makumi maviri nemaviri online uye bhuku rehunyanzvi sevhisi
6. Tumira zvikamu zvekuchengetedza chero nguva paunenge uchida
R & D Chikwata
mhando nyowani / gore
Kushandisa michina Equipment
Isu tinofara kwazvo kutora mukana uno kuita bhizinesi newe.
Zvese Zvaunoda Kuti Uzive Nezvedu